Ndakanangisa mboro pabeche ndakamutakura ndokubva ndaiti shweee, akashinyira! - Masasi eHarare
DzeBonde Ndakanangisa mboro pabeche ndakamutakura ndokubva ndaiti shweee, akashinyira!
Ndakanangisa mboro pabeche ndakamutakura ndokubva ndaiti shweee, akashinyira!
2. Ndainge ndakugara ndichitenga mu same shop everyday, not because ndomandaifarira asi kuti manga mune mukadzi wandaifarira.
Ndakati ndichipiwa change after ndatenga hangu a pie nedrink, ndakabva ndaramba ndakabata ruoko rwavo ndokubva ndati sorry but can I confess, amai munodonhedza musika. Ndakavaudza kuti musatsamwe, muchindiona ndichiuya kuzotenga kuno mazuva ese its not kuti ndofarira kutenga muno stereki asi kuti ndofarira kutengeserwa nemi, ndikauya musimo muno zviya pamunenge muri off handitenge, plus off yenyu iriko every Tuesday and Friday ndikunyeba here.She smiled and said aiwa hamusi asi kurikuenda nenyaya yenyu ndirikukuona, musati maenderera, inini ndakarorwa!
Ndakasekera ndokubva ndati kana neni ndakaroora! Ndakaburitsa card rekubasa kwangu ndokuvatambidza nefive dollars ye airtime, ndikati I am not going to ask for your number but will you buzz me mangwana muri kumba coz I know muri off. Ndakabva ndabuda ndokuenda kubasa. Mangwana akasvika, round about luch time ndakanzwa fone yakurira apa number handidziziye, ndichingodaira zvikanzi saka nhasi ukutengera kupi lunch coz handiko, ndikati nhasi handisikutenga coz ndatakura kubva kumba.
From there tanga takutaura daily paanenge ari kubasa, sending each other ma whatsapp chats, kana takuyenda kumba tese we cut communication. I used to tell her how beautiful she is and how beautiful she looks kana asina hembe to me and I have a great fantasy of us tichiisana and ndirikuda kuti kana zvichiita tiwane nguva yekuzvizama. Takaronga kuti auye kubasa paanenge ari off one day then ndokusangana ndokuenda kuma Elephant Lodge yainge iri muTown close to Makombe, ko ndaida kuyenda far from mabas edu otherwise taigona kuwonekwa nevanhu vekubasa vakazonoudza madam kumba.Takaenda paye ndokusvika hedu ko ini ndoita zvandoda kubasa ndakangobuda ndokunosangana nemukadzi uye.
Ndakanangisa mboro pabeche